Fiarovana Android: arovy ny findainao na ny takelaka misy ireto torohevitra ireto | Androidsis (Pejy 2)
Fantaro misimisy kokoa momba io fifanekena io izay noforonina niaraka tamin'ny Google Play hamaranana ny malware eo amin'ny fivarotana app.
Hanontany anao ny Facebook hanoratra horonantsary amin'ny endrikao
Fantaro misimisy kokoa momba ny fepetra hatolotry ny Facebook hamaritana raha toa ka marina ianao hoe iza no nolazainao ary tsy bot ianao.
Ahoana ny fomba hijerena ny fidirana amin'ny kaonty Facebook anao
Jereo hoe ahoana no ahitantsika raha nisy niditra tao amin'ny kaonty Facebook anay nefa tsy nahazo alalana taminay.
Ahoana ny fahitana ireo orinasa miditra amin'ny angona angonao ao amin'ny Instagram
Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao ao amin'ny Instagram izay ahafahanao mifehy izay orinasa manana fidirana amin'ny angona anao manokana.
Ahoana no hahalalanao raha nisy niditra tao amin'ny kaontinao Instagram
Jereo ny dingana tokony harahintsika mba hahitantsika raha nisy niditra tao amin'ny kaonty Instagram misy antsika nefa tsy nahazo alalana tamin'ny fotoana iray.
Fantaro misimisy kokoa momba an'io fampiasa vaovao io ao amin'ny Google izay milaza amintsika raha azo antoka na tsia ny teny miafinay ary inona no azontsika atao hanatsarana azy ireo.
Fanitsakitsahana ny fiarovana Instagram! Data manokana an'ny mpampiasa miharihary
Fantaro misimisy kokoa momba ny fanitsakitsahana fiarovana vaovao ao amin'ny Instagram izay nampiharihary ny angona momba ny mpampiasa amin'ny nomeraon-telefaona na mailaka.
Iray amin'ireo Dialer tsara indrindra ho an'ny Android. BRUTAL !!
Dialect Spectacular miaraka amina fiasa tena ilaina amin'ny fiarovana sy tsiambaratelo an'ny finday avo lenta sy ny nomeraon-telefaonantsika.
Handoa vola i Google raha te hahita bibikely amin'ny fampiharana ao amin'ny Google Play
Fantaro bebe kokoa momba io hevitra io avy amin'ny Google izay handoa vola hahitana bug ao amin'ireo rindranasa ao amin'ny Google Play hanatsarana ny kalitaony sy ny fiarovana azy ireo.
Google Chrome dia hampahafantatra anao raha tafaporitsaka ny teny miafinao
Fantaro bebe kokoa momba ilay fiasa vaovao ao amin'ny Google Chrome izay hampandre anao raha tafaporitsaka amin'ny Internet ny teny miafinao.
Ny kopian'ny FaceApp dia mety misy malware
Fantaro misimisy kokoa ireo loza izay tsikaritra noho ny kopian'ny FaceApp sasany izay misy malware sy adware ao anatiny.
Ahoana ny fanesorana ny fidirana amin'ny kaonty Google anao amin'ny telefaona Android taloha
Fantaro bebe kokoa momba ny fomba fanesorana ny fidirana amin'ny kaonty Google anao amin'ny telefaona Android taloha anao hialana amin'ny olana ara-piarovana.
Ahoana no hahalalana raha azo antoka ny fampiharana anao
Jereo ny fitaovana tsara indrindra hahalalanao raha azo antoka ny fampiharana anananao amin'ny telefaona Android anao ary ialao ny olana toy izany.
Google Play dia manala ny rindranasa fito izay mitsikilo olona
Fantaro misimisy kokoa momba ireo rindranasa nesorina tao amin'ny Google Play Store ireo satria natokana hanakorontanana mpampiasa amin'ny Android izy ireo.
Fantaro misimisy kokoa momba ireo rakipeo Google Home sy Google Assistant izay azon'ny mpiasan'ny Google henoina sy manana angona manokana.
Ny fandinihana iray dia mamantatra fampiharana sandoka maherin'ny 2.000 ao amin'ny Google Play
Fantaro misimisy kokoa momba an'ity fandinihana ity izay nahita fa misy mihoatra ny 2.000 ny apps sandoka ao amin'ny Google Play anio ary tsy nesorina daholo izy rehetra.
Lazainay aminao ny fomba ahafahanao manakana ny WhatsApp amin'ny teny miafinao na amin'ny hidin-tanan'ny rantsantanana. Fampiharana sy fomba tsara indrindra hiarovana ny resakao.
Eropa miloka amin'ny famoronana lisitra mainty mpamatsy ho an'ny 5G
Fantaro bebe kokoa momba ny lisitra mainty izay hamboarina any Eropa hisorohana ireo orinasa sasany tsy hiasa amin'ny fampandrosoana ny 5G.
Fantaro ny momba ny adiresy BeiTaAd izay nisy tamin'ny fampiharana 238 tao amin'ny Google Play ary efa navoakan'ny 440 tapitrisa heny.
Tsy mamela anao hitahiry ny sarin'ny mombamomba ny mpifandray aminao intsony ny WhatsApp. Marina ve?
Marina ve izany fa tsapanao fa tsy mamela anao hitahiry ny sarin'ny mombamomba anao intsony ny WhatsApp sa misy fomba iray hialana amin'io fiarovana io?
Google manavao ny politikam-panontana amin'ny Google Play
Jereo ny lalàna vaovao nampidirina tao amin'ny politikan'ny famoahana ao amin'ny Google Play izay manan-kery amin'ny fomba ofisialy.
Nesorin'ny Facebook ny kaonty sandoka 2.000 miliara tamin'ity taona ity
Jereo ny kaonty sandoka marobe nesorin'ny Facebook hatreto tamin'ity taona ity sy ny vokany teo aminy.
Ahoana ny fanesorana ny PIN karatra SIM anao amin'ny Android
Tadiavo ireo dingana hamafana ny kaody PIN amin'ny karatra SIM amin'ny Android ka tsy tokony hidiranao izany rehefa miditra amin'ny telefaona ianao.
Ahoana ny fomba hiarovana ny WiFi anao mba tsy hisy hiditra amin'ny tamba-jotra
Jereo ireo toro-hevitra isan-karazany azontsika raisina rehefa miaro ny WiFi an-tranontsika amin'ny fanafihana na fidirana an-tsehatra mety hitranga.
Ny fanovana rehetra momba ny tsiambaratelo natolotra tao amin'ny Google I / O 2019
Jereo ny fanovana rehetra izay ho tonga eo amin'ny sehatry ny tsiambaratelo amin'ny Android fotoana fohy, natolotra tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny Google I / O 2019.
Rindrambaiko enina nesorina tao amin'ny Google Play noho ny hosoka amin'ny doka
Fantaro misimisy kokoa momba ireo fampiharana enina nesorina tamin'ny Google Play ireo izay nesorina noho ny fisolokiana amin'ny doka.
Google Play dia hanakarama mpiasa marobe hijerena ireo fangatahana
Fantaro misimisy kokoa ireo dingana noraisin'ny Google Play mba hampandeha tsara kokoa ny fizotran'ny fampiharana.
Google namoaka tatitra fiarovana Android 2018
Fantaro misimisy kokoa momba ny tatitra fiarovana Android 2018 izay efa navoakan'ny Google tamin'ny fomba ofisialy ary mamela anay hahita ity angona ity.
Firefox Lockbox: Tonga amin'ny Android ny mpitantana tenimiafin'i Mozilla
Fantaro misimisy kokoa momba ny fanombohana ny Firefox Lockbox, mpitantana teny miafina vaovao an'i Mozilla izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny Android.
Antivirus 10% amin'ny Android ihany no mahatsikaritra ny fampiharana ratsy rehetra
Fantaro misimisy kokoa momba an'ity fandinihana ity amin'ny Android izay nanombanana ny tahan'ny fikarohana an'io antivirus malaza indrindra eny an-tsena io.
Miresaka momba ny filaminan'ny Android izahay momba ny fahazoan-dàlana fampiharana sy ny fotoana hanomezana azy ireo na tsia amin'ny ohatra azo ampiharina miaraka amina fampiharana roa izay tsy tokony halainao.
Tsy mila tadidinao intsony ny teny miafinao amin'ny Android
Misaotra ny fanamarinana vaovao FIDO azon'ny rafitra fiasa Android, tsy ho ela dia tsy hahatsiaro ny lakileninao rehetra ianao.
Fandraisana Google Play, ny fikirana rehetra tokony ho fantatrao
Atoroko anao ny toerana tena Google Playh izay tokony ho fantatry ny mpampiasa Android rehetra hitazona ny kaonty sy ny fitaovany.
Ahoana ny fomba hamantarana ireo fampiharana mandefa doka pop-up na pop-up amin'ny findainao Android
Ireo pop up ad tsy ara-dalàna dia alefan'ny fampiharana apetrakao. Mampianatra anao ny fomba hamaritana azy ireo amin'ny fomba tsotra izahay.
Adiantum: ny encryption vaovao ho an'ny farany ambany amin'ny Android
Fantaro bebe kokoa momba ny Adiantum, ny encryption vaovao an'ny Google natao ho an'ny farany ambany amin'ny Android izay efa natomboka tamin'ny fomba ofisialy eny an-tsena.
Ahoana ny fomba hahatonga ny telefaona Android ho azo antoka kokoa, hoy i Google
Jereo ireto torohevitra dimy ireto avy amin'ny Google izay hanampy antsika hanana telefaona Android azo antoka kokoa amin'ny fomba tsotra.
Camera's New Stick Up Cam Security Camera mifanaraka amin'ny Alexa
Ny fakantsary Ring Stick Up Cam dia maodely vaovao avy amin'ny mpanamboatra Amazon, izay omeny ho antsika ary mifanaraka amin'ny atitany sy ivelany.
Hainao ve ny manavaka ny mailaka phishing amin'ny mailaka azo antoka? Jereo miaraka amin'i Google
Fantaro bebe kokoa momba ity lalao noforonin'i Google ity izay hahafahanao mamantatra mailaka phishing mora tonga amin'ny mailakao.
Google Play dia nanala ireo fampiharana sandoka 85 izay naneho doka fotsiny
Fantaro misimisy kokoa momba ireo fampiharana sandoka 85 nesorina tamin'ny Google Play ireo satria natokana hampiseho doka fotsiny izy ireo.
Jereo ny fomba rehetra anananay amin'ny Android hanafoanana viriosy amin'ny finday. Fomba isan-karazany misy.
Ny patch patch ho an'ny Samsung Galaxy S9 + dia azo alaina izao
Ny fanavaozana ny fiarovana ny volana Desambra ho an'ny Samsung Galaxy S9 + dia azo sintonina izao.
90% amin'ireo fampiharana sinoa no manangona angon-drakitra ho an'ny mpampiasa
Fantaro misimisy kokoa momba ny angona nangonin'ny fampiharana sinoa sasany araka ny fanadihadiana natao tao amin'ny firenena.
Ahoana ny fomba famoronana backup Android amin'ny Google Drive
Jereo hoe ahoana no ahafahantsika manao backup amin'ny tanana amin'ny finday Android ary hitahiry azy ao amin'ny Google Drive.
Fampiharana manimba izay mody fanesorana lalao ao amin'ny Play Store
Fantaro misimisy kokoa momba ireo rindranasa ratsy ireo izay niditra an-tsokosoko tao amin'ny Play Store ary nahatratra mihoatra ny 500.000 ny tontalin'ny fisintomana.
Huawei Special: Ahoana ny famerenana backup amin'ny Pendrive tsikelikely
Ahoana no hamantarana raha manana fampiharana mampidi-doza amin'ny findainao Android ianao
Fantaro ny fomba ahafahanao mamantatra raha manana rindranasa ratsy amin'ny findainao Android ianao sy ireo dingana tokony harahina amin'izany.
Google dia namoaka ny tatitra fiarovana vaovao amin'ny Android
Fantaro bebe kokoa momba ity tatitra fiarovana ity izay navoakan'i Google momba ny toetry ny fiarovana Android androany.
Ny fanavaozana ny fiarovana Novambra ho an'ny Galaxy Note 8 dia efa misy
Ny orinasa Koreana Samsung dia namoaka ny fanavaozana ny fiarovana mifanaraka amin'izany amin'ny volana Novambra ho an'ny Samsung Galaxy Note 8.
Google dia manala ny famohana ny feo Android ho tsy azo antoka
Izy ireo dia tao amin'ny Pixel 3 izay nahitana fiasa vaovao izay misolo ny famohana ny feo. Tsy ho ela dia ho tonga ao amin'ny kinova Google vaovao izy io.
Efa misy ny fanavaozana ny fiarovana ny volana Oktobra ho an'ny Galaxy Note 8
Ny orinasa Koreana Samsung dia nanomboka namoaka ny fanavaozana ny fiarovana mifanaraka amin'ny volana Oktobra 2018 ho an'ny Note 8
Kaonty 30 tapitrisa tratry ny hack Facebook. Fantaro bebe kokoa momba ny olana ara-piarovana amin'ny tambajotra sosialy be mpampiasa.
Kaonty Facebook efa ho 50 tapitrisa no tandindomin-doza noho ny fandikan-dalàna iray
Ny fanitsakitsahana ny fiarovana ny Facebook dia nametraka kaonty mpampiasa 50 tapitrisa teo ho eo, hoy ny tatitry ny orinasa.
Rahoviana isika no tsy maintsy mamolavola ny findaintsika Android?
Rehefa tsara ny mamolavola ny findaintsika Android. Jereo ny toe-javatra nanolorana anao hanome endrika endrika finday Android.
Ahoana ny fomba hahalala izay fampiharana amin'ny angona sivana Android
Ahoana ny fomba hifehezana raha mivaoka angon-drakitra ny fampiharana Android. Jereo ireto torohevitra ireto mba hanatsarana ny tsiambaratelon'ny telefaona sy ny rindranasao.
Inona no, ahoana ny fomba fiasany ary inona no atao hoe VPN? Fantaro bebe kokoa momba ny atao hoe VPN ary ny zavatra azontsika ampiasaina amin'ny Android, ankoatry ny tsara indrindra any.
Android dia nandoa valisoa $ 3 tapitrisa amin'ny fahitana bug
Mandoa $ 3 tapitrisa i Android hahitana lesoka amin'ny fiarovana. Fantaro bebe kokoa momba ny programa valisoa an'ny orinasa.
Fahazoan-dàlana inona no angatahan'ny fangatahana amintsika amin'ny Android?
Fahazoan-dàlana inona no angatahin'ireo rindranasa amin'ny Android. Jereo ny alalana mahazatra indrindra amin'ny Android sy ny fomba fitantanana azy ireo.
Ny Galaxy Note 5 sy Galax S6 Edge + dia hijanona tsy handray fanavaozana ny fiarovana isam-bolana
Ny orinasa koreana Samsung dia nanambara fa ny Galaxy Note 5 sy ny Galaxy S6 Edge + dia tsy hahazo intsony ny fanavaozana isam-bolana intsony. Ny fanavaozana ny fiarovana isam-bolana ho an'ny Galaxy Note 5 sy ny Galaxy S6 Edge dia tsy zava-misy intsony.
Nahita fahalemena iray izay mamela ny fanarahana ireo telefaona tsy nohavaozina tamin'ny Android 9.0 Pie
Ny faharefoana dia mamela ny fanarahana ireo telefaona tsy nohavaozina tamin'ny Android Pie. Fantaro misimisy kokoa momba io lesoka fiarovana io hita tao amin'ny Android.
Ny mpiorina Fortnite dia nanana olana ara-piarovana lehibe
Miaraka amin'ny fanolorana ny Galaxy Note 9, tonga ny fanambarana ofisialin'ny Epic Games momba ny fanombohana ny Fortnite, iray amin'ireo lalao andrasana indrindra, ny Epic Games installer hahafahana misintona Fortnite amin'ny fitaovana Android dia manana lesoka fiarovana lehibe izay hitan'i Google ary efa voavaha izany.
Nokia dia manakana ny bootloader amin'ny fanavaozana ny fiarovana farany
Taona vitsivitsy lasa izay, maro ireo mpampiasa nanolo-tena hametraka ROM manokana mba hahafahana mahazo tombony betsaka amin'ny terminal azy ireo noho ny fanavaozana ny fiarovana farany natombok'i Nokia, manakana ny mety hahafahana mamoha ny bootloader an'ny terminals, fanapahan-kevitra noraisinao nefa tsy nanambara izany teo aloha.
Android One dia hanana fanavaozana ny fiarovana isam-bolana
Ny finday Android One dia hanana fanavaozana ny fiarovana isam-bolana. Fantaro bebe kokoa momba ny fahita matetika fanavaozana ireo.
Tehaka fanaovana tehaka ho an'i Samsung: ny avo lenta dia nahazo ny tambajotra fiarovana isam-bolana nandritra ny herintaona
Tsy tokony ho faly amin'ity vaovao ity isika, satria ilaina ho an'ny mpanamboatra tsirairay izany, saingy noho ny tsy fahampian'ny maro, dia manasongadina izany ao amin'ny Galaxy S8 / S9 izahay.
Galaxy Note 8 dia mahazo patch patch aogositra
Ny patch security aogositra dia tonga amin'ny Galaxy Note 8. Jereo ny momba ilay patch izay mamely ny avo lenta an'ny Samsung amin'izao andro izao.
Samsung Galaxy Note 5 dia mahazo fanavaozana ny fiarovana ny volana Jolay 2018
Na dia efa nipetraka an-tsena vetivety aza ny terminal sasany, ny mpanamboatra sasany, anisan'izany ny Samsung, dia tsy nanadino tanteraka momba ilay orinasa Koreana Samsung dia vao nanomboka nanala ny fanavaozana ny fiarovana ny Samsung Galaxy Note 5
Ny fanavaozana ny fiarovana ny volana jolay ho an'ny Galaxy S8 sy S8 + dia efa misy izao
Toy ny isam-bolana, ny orinasa Koreana dia nanangana ny mpizara azy hanavao ny finday avo lenta an'ny orinasa indrindra ho an'ny The update Update mifandraika amin'ny volana Jolay 2018 ho an'ny Samsung Galaxy S8 sy S8 + dia misy izao
Ny fanavaozana ny fiarovana ny volana jolay ho an'ny Galaxy J6 dia misy any Espana izao
Ny fanavaozana ny fiarovana voalohany an'ny Galaxy J6 dia azo alaina ao Espana sy Italia izao, izay firenena voalohany nahazo azy.
Ny lalao devoly an'ny Ping Pong King: lalao mahazatra tsy voatanisa
Raha te handany minitra mahafinaritra vitsivitsy miaraka amin'ny lalao mampiankin-doha ianao dia Ping Pong King ity. Lalao haingana sy devoly.
Ny patch fiarovana ny volana jona ho an'ny Galaxy S9 sy S9 + misy izao
Ny fanavaozana ny fiarovana Galaxy S9 sy S9 + ho an'ny volana Jona 2018 dia azo alaina ao Eropa ankehitriny.
Ny patch security June ho an'ny Galaxy Note 8 dia misy any Eropa izao
Ny fanavaozana ny fiarovana ireo terminal izay tantanan'ny Android dia zava-misy izay tsy misy olona tsy miraharaha, na eo aza ...
Ny fanavaozana ny fiarovana farany an'ny Galaxy S9 sy S9 + dia ahafahantsika manoratra antso
Ny fanavaozana ny fiarovana farany ho an'ny Galaxy S9 sy Galaxy S9 + dia mampihetsika ny fiasa mamela antsika hanoratra antso an-tariby ataontsika.
Ny orinasa Koreana Samsung dia namoaka, manerantany, ny fanavaozana ny fiarovana ny Mey 2018 ho an'ny Galaxy Note 8
Nanadihady tany Aostralia i Google momba ny olana amin'ny Android
Nanadihady tany Aostralia i Google momba ny fivarotana angona momba ny mpampiasa amin'ny Android. Fantaro bebe kokoa momba ny fikarohana atrehin'ity orinasa ity ho an'ny maodelin'ny orinasany.
Google dia hanao izay tsy maintsy hataon'ny patch patch
Google dia manery ny hanao patch patch. Fantaro bebe kokoa momba ny fepetra vaovao entin'ny orinasa hiarovana mpampiasa betsaka araka izay tratra.
Raha mitady rindrambaiko tsara ianao hifehezana ny tsiambaratelon'ny Android sy ny rindranasa napetrakao ary tsy afa-po amin'ny App Lock tsotra ianao, azoko antoka fa ho tianao ity fampiharana ity.
WhatsApp dia manery ireo mpampiasa hanamafy fa 16 taona izy ireo
WhatsApp dia mangataka amin'ireo mpampiasa azy hanamafy fa 16 taona izy ireo farafaharatsiny. Fantaro misimisy kokoa momba ny fepetra fanaraha-maso fampiharana vaovao hanarahana ny fitsipika vaovao eropeana.
Torohevitra hiarovana ny kaonty Gmail-nao
Torohevitra efatra hiarovana ny kaonty Gmail-nao. Jereo ireto dingana tsotra ireto mba hiarovana ny tsiambaratelo sy fiarovana ny kaonty Gmail anao.
Ny Facebook dia manavao ny toe-javatra miafina sy ny fisie ao anaty fampiharana
Facebook manavao ny toe-javatra miafina amin'ny fenitra Eoropeana vaovao. Fantaro misimisy kokoa momba ny fanovana izay atolotry ny tambajotra sosialy amin'ny fampiharana noho ny fahatongavan'ny fitsipika vaovao momba ny fiainana manokana.
Soso-kevitra an-tsary izay anehoako anao fampiharana maimaim-poana ho an'ny Android izay hamela anao hanova endrika Android hidin-trano vaovao, fomba azo antoka kokoa noho ny lamina hamaha, PIN, tenimiafina na dian-tànana.
Fampiharana Android mihoatra ny 3.300 izay mizara angona avy amin'ireo zaza tsy ampy taona hita
Rindrambaiko Android 3.300 izay mpitsikilo ireo zaza tsy ampy taona no voamarika. Fantaro bebe kokoa momba ireo rindranasa natokana ho amin'ny fahazoana sy fizarana angona avy amin'ny zaza tsy ampy taona.
Google te-hanavaka ny patch fiarovana Android sy ny mpanamboatra
Google dia hampiditra ny fanovana ny patch security. Fantaro misimisy kokoa momba ny drafitry ny orinasa te-hampiditra fanovana eo amin'ny patch ho an'ny telefaona Android.
Tutorial video azo ampiharina momba ny fiarovana Android izay anazavako ny fomba fampiasana fivarotana hafa amin'ny Google Play Store soa aman-tsara mba hampidina sy hametrahana apks.
Voasakana ny fampiharana MyFitnessPal
MyFitnessPal dia voajirika, nanolorana anao hanova ny teny miafinao. Fantaro bebe kokoa momba ny hack izay misy fiantraikany amin'ny fampiharana. Noho izany, nanolo-kevitra ny mpampiasa hanova ny teny miafiny amin'ny fampiharana faran'izay haingana.
Chrome 65 dia manolotra ny fanovana ny maody fampiatoana azy
Google Chrome 65 dia manolotra ny fanovana ny maody fanaovana incognito. Fantaro misimisy kokoa momba ireo fanovana natao tamin'ny fomba incognito tao amin'ny Google browser.
Rindrambaiko maloto 39 tapitrisa no nesorina tao amin'ny Play Store. Fantaro misimisy kokoa ireo tarehimarika naseho tao amin'ny tatitra momba ny fiarovana an'i Google.
Raha toa ny Galaxy S9 sy ny Galaxy S9 + vao teny an-tsena nandritra ny andro vitsivitsy, dia namoaka ny fanavaozana ny fiarovana voalohany ho an'ny volana martsa ny orinasa koreana.
Galaxy A8 martsa fanavaozana ny fiarovana azo alaina izao
Ireo tovolahy ao Samsung dia nanala ny fanavaozana ny fiarovana tamin'ny volana martsa ho an'ny Samsung Galaxy A8 (2018)
Ny patch martsa 2018 dia azo alaina ho an'ny Pixel sy Nexus
Ny Pixel 2 sy Nexus dia efa manana patch patch martsa. Fantaro bebe kokoa momba ny fahatongavan'ilay patch vaovao miaraka amin'ny fanatsarana.
Ny orinasa Koreana Samsung dia nanambara ireo terminal fa hijanona tsy handray fanavaozana ny fiarovana ary hanatevin-daharana ny programa fanavaozana ny fiarovana isam-bolana sy isam-bolana.
Fampiharana Android tsara indrindra amin'ny fikarakarana ny biby fiompinao. Hijery misimisy kokoa momba ity safidy fampiharana ity izay hikarakarana tsara ireo biby fiompinay.
Fampiharana tsotra izay hahafahantsika manamarina ny fiarovana ny tambajotra Wifi misy antsika, izay fitaovana mifandray ary mety ho marefo, na dia ny Internet aza.
Ny fanavaozana ny fiarovana ny volana febrily ho an'ny Galaxy S8 sy S8 + dia efa misy izao
Ny fanavaozana ny fiarovana ho an'ny volana Febroary ho an'ny Galaxy S8 sy S8 + dia azo alaina amin'ny alàlan'ny terminal mifandraika.
Marika Android roa ihany no manome fiarovana tsara
Marika Android roa ihany no manome fiarovana tsara. Fantaro bebe kokoa momba ity tatitra momba ny fiarovana ity izay manasongadina ireo olana amin'ny Android.
Ny orinasam-piarovana Sophos dia namoaka tatitra izay ampisehoany anay ny rindranasa 19 izay hita tao amin'ny Play Store ary namela ireo mpamorona hitrandraka vola crypto nefa tsy nahazoana alalana.
Telefaona Android an-tapitrisany no voan'ny crypto
Telefaona Android an-tapitrisany no ampiasaina hitrandrahana vola crypto nefa tsy tsapanao izany. Te hahafantatra ny fomba hiarovanao tena ve ianao?
Google dia nandoa 2,9 tapitrisa dolara ho an'ny fahalemena hita
Google dia nandoa $ 2,9 tapitrisa noho ny fahalemena hita. Fantaro misimisy kokoa momba ny fandoavam-bola nataon'ny orinasa mba hahitana hadisoana.
Bitdefender: The Ultimate Antivirus ho an'ny Android
Bitdefender Mobile Security: ny antivirus tsara indrindra ho an'ny Android. Fantaro bebe kokoa momba an'ity fitaovana antivirus sy fiarovana ho an'ny Android ity. Ny tsara indrindra azontsika jerena ankehitriny.
Fetsy hanatsarana ny fiainana manokana amin'ny Android
Fetsy tsotra 6 hanatsarana ny fiainana manokana amin'ny Android. Tadiavo ireo fikafika ireo izay ahafahanao manatsara ny tsiambaratelo momba ny angonao amin'ny fitaovana Android anao.
Rindrambaiko maloto maherin'ny 700.000 no nesorina tao amin'ny Google Play noho ny AI
Fampiharana maloto 700.000 nesorina tao amin'ny Google Play tamin'ny taona 2017. Jereo bebe kokoa momba ny asa fiarovana nataon'i Google tamin'ny taon-dasa.
3 SEGA Sonic lalao mamoaka ny angona mpilalao tsy miankina. Fantaro bebe kokoa momba ity famoahana ity izay misy ny lalao SEGA ao amin'ny Google Play.
Torohevitra hialana amin'ny fametrahana fampiharana maloto amin'ny finday
Ahoana ny fomba hisorohana ny fametrahana fampiharana maloto amin'ny telefaonintsika. Jereo ireto torohevitra ireto mba hanampiana anao tsy hametraka fampiharana maloto.
Ny fanavaozana ny fiarovana ny volana Janoary ho an'ny Samsung Galaxy S8 sy Galaxy S8 + dia azo alaina ao.
Ahoana ny fomba hamerenanao SMS sy hiantsoana log tsy misy faka
Tutorial video azo ampiharina izay ampianariko azy ireo hamorona backup amin'ny SMS sy ny antso nefa tsy mila miorim-paka sy mitombina hamerenana amin'ny terminal na terminal hafa.
Ny fanavaozana ny fiarovana S6 edge + ho an'ny volana desambra dia efa misy
Ny fanavaozana ny fiarovana ny sisin'ny Galaxy S6 + mifandraika amin'ny volana desambra, dia efa nanomboka ho azon'ny mpampiasa rehetra, miaraka amin'ny fanombohany manomboka any Shina indray.
Samsung dia namoaka ny fanavaozana ny fiarovana ho an'ny Galaxy A7 (2017)
Ny terminal an'ny Galaxy A7 2017 dia efa manana ny fanavaozana ny fiarovana natombok'i Samsung natokana ho azy ireo.
Ny Galaxy A3 2016 sy A3 2017 dia mahazo fanavaozana fiarovana vaovao
Ny Galaxy A3 2016 sy A3 2017 dia nahazo fanavaozana fiarovana vaovao, fanavaozana izay manatsara ihany koa ny fahombiazan'ny maodely roa ary manamboatra bug kely.
Loapi: Ny malware izay mitrandraka vola crypto amin'ny alàlan'ny fitaovanao
Loapi malware dia mitrandraka vola crypto mampiasa ny fitaovanao. Fantaro bebe kokoa momba ity malware ity izay misy fiatraikany amin'ny fitaovana Android ankehitriny.
Adups Spyware sinoa dia hita indray Android
Adapt: ​​Voamarika indray amin'ny Android ny spyware sinoa. Fantaro bebe kokoa momba ity spyware ity izay nahatratra ny Android tamin'ny taona lasa.
Google dia nanala fampiharana 85 tao amin'ny Play Store izay nangalatra tenimiafina. Fantaro misimisy momba ny fangalarana tenimiafina apps.
Antony fametrahana ny fifehezana ny ray aman-dreny amin'ny findain'ny zanakao
Antony 3 hampiasana ny fifehezana ny ray aman-dreny amin'ny findain'ny zanakao. Fantaro ireo antony mahasoa ny fampiasana fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreny.
Ny bokotra hijerena fanavaozana dia tapaka amin'ny Android sasany. Fantaro bebe kokoa momba ity bibikely ity izay niseho tamin'ny telefaona Android.
Google Play dia hanatsara ny tsiambaratelo momba ny angona momba ny mpampiasa
Google Play dia hampitandrina anao momba ny alalana fampiharana tsy ilaina. Fantaro misimisy kokoa momba ny fepetra fiarovana vaovao ao amin'ny magazay.
Ny fanavaozana ny fiarovana farany an'ny Galaxy Note 8 dia efa misy any amin'ny firenena sasany, fanavaozana izay mitondra vaovao miasa ihany koa ho antsika
Ny fanavaozana ny fiarovana farany ho an'ny Galaxy S8 sy S8 + dia nanala ny famahanana haingana
Ny fanavaozana ny fiarovana farany ho an'ny Galaxy S8 sy S8 + dia toa nanimba ny fiasan'ny rafitra famahanana haingana an'ireo terminal ireo.
Mangataka selfie anao ny Facebook hanamarinana ny mombamomba anao
Facebook dia hangataka selfie anao hanamarinana ny mombamomba anao. Fantaro misimisy kokoa momba ny fepetra vaovao hatolotry ny tambajotra sosialy atsy ho atsy.
Ny fampiharana telo amin'ny efatra amin'ny Android dia manara-maso anay
Ny telo amin'ireo fampiharana Android efatra dia manara-maso ireo mpampiasa. Fantaro misimisy kokoa momba ireo rindranasa ireo sy ny fomba ahazoan'izy ireo vaovao.
Google dia mahita mpitsikilo izay misy fiatraikany amin'ny WhatsApp
Tizi: Spyware izay mampiasa angona tsy miankina amin'ny WhatsApp sy fampiharana hafa. Fantaro bebe kokoa momba ny spyware izay misy fiatraikany amin'ny rindranasa maro.
Ny angona mpampiasa OnePlus dia angalarina isaky ny enina ora
Ny data avy amin'ny telefaona OnePlus dia angalarina isaky ny enina ora. Fantaro misimisy kokoa momba ity lesoka tsy fandriam-pahalemana lehibe ity.
BankBot: ny Trojan izay mangalatra angon-drakitra momba ny banky voamarika amin'ny fampiharana jiro
BankBot: ny Trojan hangalatra angon-drakitra momba ny banky hita amin'ny fampiharana jiro. Fantaro bebe kokoa momba ity olana ara-piarovana ity.
Ny findainao Android mahalala ny toerana misy anao na dia kilemaina aza
Ny findainao Android mahalala ny toerana misy anao na dia kilemaina aza. Fantaro misimisy kokoa momba ny fieken-keloka noteren'ny Google hatao.
Notafihan'ny malware i Android isaky ny 10 segondra
Isaky ny 10 segondra dia manafika rindrambaiko Android ny malware. Fantaro misimisy kokoa momba an'ity data ity izay mampiseho ny olan'ny fiarovana amin'ny rafitra fiasa.
OnePlus dia mametraka mialoha ny rindrambaiko amin'ny findainao afaka miorim-paka
OnePlus dia mametraka mialoha ny rindrambaiko amin'ny findainao afaka miorim-paka. Fantaro bebe kokoa momba ny fampiharana novolavolain'i Qualcomm.
Google Chrome 64 dia hanakana ny doka hitarika anao amin'ny pejy hafa
Google Chrome 64 dia hanakana ny doka hitarika anao amin'ny pejy hafa. Fantaro bebe kokoa momba ny vaovao ao amin'ny Chrome 64.
Azonao atao izao ny misintona ny fanavaozana ny fiarovana ny malware an'ny BlueBorn an'ny Samsung Galaxy J5 (2017) ...
Ianaro ny fomba hanomezanao finday Android taloha fampiasana faharoa amin'ny alàlan'ny fampiasana azy ho fakan-tsary mpitsikilo mahomby ao an-trano na any am-piasana
Ny faharefoana ao amin'ny WhatsApp dia ahafahan'ny olona iray mitsikilo ny asan'ny hafa amin'ny fampiharana
Ny faharefoana ao amin'ny WhatsApp dia ahafahana mahafantatra rehefa olona roa no mifanakalo hafatra, na rehefa mandeha matory ny mpampiasa
Kaspersky mpiara-manorina dia manomana finday azo antoka hiadiana amin'ny fitsikilovana sy fanangonana data
Natalya Kaspersky dia mamolavola ny finday Taiga izay hiaro ny mpampiasa azy amin'ny fanangonana data amin'ny alàlan'ny apps.
Ny filokana dia miloka amin'ny fiarovana an-trano amin'ny fanombohana vokatra vaovao telo
Ny orinasa Nest dia manolotra ny rafitra fiarovana an-trano voalohany, Nest Secure, mora, ilaina ary miaraka amin'ny kojakoja hafa
Mitandrema amin'ny fiarovana Antivirus DU !! Angony ny mombamomba ny mpampiasa tsy misy alalana
Mitandrema amin'ny DU Antivirus Security, fampiharana iray izay, araka ny Check Point, dia mitatitra ny orinasam-piarovana voalohany fa nangalatra angon-drakitra izy ireo raha tsy nahazo alalana.
Ahoana no hahafantaranao raha marefo amin'ny Blueborne ny findainao
Amin'ity lesona an-tsary ity dia manazava ny fomba hahalalana raha misy fiantraikany amin'ny findainao ny Blueborne ary manome anao torohevitra azo ampiharina mba hisorohana izany.
BlueBorne dia malware Android izay misy fiantraikany amin'ny fitaovana maherin'ny 8.400 tapitrisa amin'ny alàlan'ny fahalemen'ny Bluetooth
Samsung KNOX novaina sy nohatsaraina
Samsung KNOX, sehatra fiarovana Samsung namboarina ho an'ny sehatry ny fandraharahana, novaovaozina ary mitondra fitaovana vaovao sy vaovao ho antsika.
Ny fanavaozana ny Oxygen OS 4.1.7 ho an'ny OnePlus 3 sy 3T dia mampiditra fanarenana bibikely sy fiarovana
Ny fanavaozana ny Oxygen OS 4.7.1 vaovao navoaka ho an'ny OnePLus 3 sy OnePlus 3T dia tsy misy afa-tsy ny fanitsiana bug sy ny fanatsarana ny fiarovana.
Ny Purism Libraryem 5 dia finday tonga lafatra ho an'ireo mpankafy filaminana tanteraka
Ny Purism Libraryem 5 no finday avo lenta azo antoka avy amin'ny orinasa Purism, miaraka amin'ny rafitra miasa mifototra amin'ny Debian GNU / Linux ary ny encryption faran'izay betsaka.
Ahoana no ahafahan'ny hackers mitsikilo ny findainao raha raisinao amin'ny fanamboarana any amin'ny foibe tsy ofisialy
Mitandrema tsara rehefa manamboatra ny findainao any amin'ireo ivon-toerana misy anao satria mety hahita fitsikilovana ianao sy ireo hetsika rehetra nataonao an-tserasera.
Qualcomm dia manambara teknolojia vaovao ho an'ny fakantsary finday Android
Qualcomm Spectra dia rafitra fakan-tsary roa izay afaka mamakafaka ny halalin'ny sehatra sy mamantatra ireo hetsika amin'ny fotoana tena izy amin'ny telefaona Android.
Atorinay anao ny fomba fanesorana viriosy amin'ny Android amin'ny dingana vitsivitsy vitsivitsy ary amin'izany dia hitantsika ny fampiharana maloto ary hamafana izany. Voa ve ianao? Jereo!
Asehonay aminao ny fomba famahana ny olana amin'ny takelaka takelaka amin'ny Android M ary asehonay anao ny toerana anaovana ny fikirakirana ny overlay.
Google dia afaka milaza izay rindranasa mangataka fampahalalana manokana loatra amin'ny mpampiasa
Google dia namorona algorithm hianarana machine izay mamela hamantatra rehefa mila alalana betsaka kokoa noho izay ilainy ny fampiharana iray
Afaka manao kopia backup an'ny Mac na PC ao amin'ny Google Drive ianao izao
Ary farany, Google nandefa fitaovana fanavaozana sy fampifanarahana vaovao azonao ampiasaina amin'ny Mac na PC-nao miaraka amin'ny Google Drive
Fanairana Android! Spy Dealer ny malware vaovao izay manangona ny Android-nao!
Fanairana Android! Mitandrema amin'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo rehefa misintona ianao, dia mety hampiharihary ny loza mety hitranga eo amin'ny data.
Fantatrao ve ny "Panic Mode" an'ny Android 7.1 Nougat?
Ny fanavaozana farany ny Android 7.1 Nougar dia misy fomba fampitahorana hiadiana amin'ny fampiharana hosoka izay manakana ny mpampiasa tsy handao azy ireo
Ny patch vaovao fiarovana ny volana Jolay dia azo alaina ho an'ny Pixel sy Nexus
Ny sarin'ny rafitra sy ny OTA amin'ny fametrahana ity patch vaovao fiarovana ny volana Jolay ity dia misy izao. Inona no andrasanao hametrahana azy?
ANDROID ALERT !! Tandremo ny NotPetya ny ransomware vaovao izay manamarina an'izao tontolo izao
Mitandrema amin'ny NotPetya ilay Ransomware vaovao izay mametraka izao tontolo izao hanidy anao, mampianatra anao izahay hiaro tena amin'ny loza mitatao momba ny fandriam-pahalemana.
Ny efijery fanidiana tsara indrindra ho an'ny Android nefa tsy very ny asan'ny rantsantanana amin'ny terminal Samsung sy amin'ny safidy mahaliana maro.
Taorian'ny fikarohana be dia be, ny AV-TEST dia namoaka ny fampiharana antivirus tsara indrindra ho an'ny Android. Jereo hoe iza izy ireo ary sintomy izay tadiavinao.
Fanairana Android !!: Tandremo ny kskas.apk
Raha iray amin'ireo olona misintona fampiharana ivelan'ny Play Store ianao dia tandremo ny lozisialy maloto vaovao antsoina hoe kskas.apk
WannaCry ransomware mety ho tonga amin'ny Android
Ilay ransomware WannaCry malaza dia mety manana ny dikanteniny ho an'ny Android, WannaLocker, araka ny tatitra nataon'ny Avast taorian'ny tranga sasany nitranga tany Shina.
Nest dia mandefa ny fakantsary fiarovana anatiny vaovao an'ny Nest Cam IQ
Ny Nest firm dia mandefa ny fakantsary fiarovana anatiny vaovao, ny Nest Cam IQ, afaka manavaka ny olona amin'ny biby fiompy
Judy malware dia mampivadika ny Android
Iza i Judy? Io ilay malware vaovao izay mampivadika ny Android, satria tombanana fa mety nahatratra mpampiasa an-tapitrisany izy io.
Miaraka amin'ny Android O ianao dia hanatsara ny fanamarinana ireo fampiharana sy serivisy amin'ny alàlan'ny SMS
Android O dia hanatsotra sy hanafaingana ny fizotry ny fanamarinana ny maha-izy azy amin'ny alàlan'ny kaody SMS amin'ny fampiharana sy serivisy
Fanairana Android!, Inona no atao hoe ransomware ary ahoana no hisorohana azy?
Azavainay ny atao hoe Ransomware, ny fomba fiantraikany amin'ny Android anao sy ny zavatra azonao atao mba ho voaro sy tsy ho voaro amin'ity malware mampidi-doza ity
McAfee antivirus dia ho avy apetraka amin'ny Samsung Galaxy S8 rehetra
McAfee VirusScan dia programa antivirus izay hapetraka amin'ny alàlan'ny default amin'ny fitaovana rehetra ao amin'ny faritra Samsung Galaxy S8.
Herintaona an'ny Netflix maimaim-poana? Ilay scam vaovao miely amin'ny WhatsApp
Ny polisim-pirenena dia nampitandrina ny amin'ny fanandramana fisolokiana vaovao amin'ny alàlan'ny WhatsApp manolotra famandrihana Netflix maimaimpoana mandritra ny herintaona
Mailo ny tontolo iray manontolo noho ity lalao trozona manga mampidi-doza sy mahafaty ity izay mahatratra tanora an'arivony maro manerantany.
Rindrambaiko maherin'ny 400 avy amin'ny Play Store no mora tohina
Fampiharana efa-jato mahery hita tao amin'ny Play Store for Android izay mora tratran'ny fanafihana malware sy fangalarana data
Ahoana ny fomba hijerena ny apk anao raha mety misy aretina
Amin'ity torolàlana azo ampiharina vaovao ity amin'ny alàlan'ny torohevitra, dia hampianariko ianao handinihana ny apk hitadiavanao aretina, virus na malware.
Esorin'i Google ao amin'ny Play Store ilay fampiharana "System Update" sandoka
Nesorin'i Google tao amin'ny Play Store ny rindrambaiko fanavaozana ny System satria raha ny tena izy dia rindrambaiko mpitsikilo izay efa nafafa im-tapitrisany
Ny tatitry Nokia farany dia manambara ny fiakaran'ny 400% amin'ny otrikaretina malware, amin'ny ankamaroan'ny terminal Android
Nokia dia namoaka ny tatitra vaovaony "Threat Intelligence Report" izay manambara fitomboan'ny aretina azo avy amin'ny malware amin'ny Android.
Samsung hanolotra fanavaozana ny fiarovana isam-bolana ho an'ireo finday avo lenta any Etazonia
Rehefa afaka 18 volana ny fampanantenany, Samsung dia namoaka fanavaozam-baovao momba ny fiarovana isam-bolana ho an'ireo finday avo lenta novonoiny tany Etazonia.
Manomana fanavaozana ny vokatra fiarovana azy ny Nest
Manomana fanavaozana ny katalaogin'ny vokatra fiarovana an-trano an-trano i Nest izay havoaka amin'ny fararano manaraka
Windows malware dia voamarika tamina fampiharana Android zato mahery
Ny orinasam-piarovana Palo Alto Networks dia mahita malware miatrona amin'ny fampiharana Android 132 noforonina tany Indonezia avy amin'ny mpamorona samihafa
Anio dia asehonay aminao ny fomba handefasana ny telefaoninao mba hahafahan'izy ireo manampy anay hifandray amin'ny fifandraisana tadiavinay amin'ny fandaharam-potoanay.
Apple dia miantso ireo mpampiasa azy hanavao ny iOS 10.2.1 noho ny lesoka fiarovana lehibe
Apple dia miantso ny mpampiasa rehetra ny rafitra fiasan'ny iOS amin'ny fanavaozana maika ny iOS 10.2.1 noho ny lesoka fiarovana lehibe.
Google dia manolotra ny G Suite Enterprise, miaraka amin'ny fampivoarana ny fiarovana sy ny fitantanana
Google dia mampihatra haavo Enterprise vaovao ao amin'ny G Suite izay mampiditra endrika fiarovana sy fitantanana vaovao sy tsara kokoa
ANDROID ALERT !! HummingBad dia mitokona indray ary amin'ity indray mitoraka ity dia miditra mivantana ao amin'ny Google Play Store izy
Amin'ity fampandrenesana Android vaovao ity dia miresaka momba ny HummingBad izahay, malware iray izay niditra an-tsokosoko mivantana tao amin'ny Play Store ary voamarika tamina fampiharana 20.
Ahoana ny fomba hiarovana ny fampiharana apetraka amin'ny Android tsirairay ... na tsia
Androany dia mampianatra anao ny fomba hiarovana ny rindranasa misy anao aminà fampiharana maimaimpoana izahay, tsy misy doka ary tsy misy fividianana ao anaty fampiharana izay misy fari-pianakaviana mandeha tsara.
Facebook dia manolotra fiarovana fanampiny miaraka amin'ny fanohanana fanalahidy fiarovana USB
Zava-baovao lehibe ho an'ny fiarovana ireo kaonty miaraka amin'ny fanohanan'ny Facebook ny lakilen'ny fiarovana USB izay mamela hanisy sosona fanampiny.
Ny fananganana farany ny Xperia X Concept dia mitondra mode night sy patch patch
Sony dia nampiditra tao amin'ny kinova farany an'ny Xperia X Concept manangana fomba alina vaovao izay mampihena ny jiro manga amin'ny famakiana mahafinaritra.
Nanazava ny fomba fahitan'ny Android ny malware alohan'ny fialana amin'ny tanana
Alohan'ny hahalasa tànana azy dia mamantatra malware i Android noho ny metrika DOI izay hazavain'i Google anio.
Ny tetikadin'i Google Transparency Key dia mikendry ny hanatsara ny fiarovana ny encryption ampahibemaso
Key Transparency no tetikasan'i Google izay tanjony hanatsarana ny famantarana ny lakilen'ny fanafenana ampahibemaso
'Varavarana ambadiky' ao amin'ny WhatsApp dia mamela ny fitsikilovana hafatra voarindra
Ny Guardian dia manamafy fa ny backside WhatsApp dia mbola misy raha hita tamin'ny volana aprily lasa teo.
Tandremo ny APKs an'ny Super Mario Run sandoka, mangalatra ny mombamomba ny banky izy ireo
Super Mario Run dia efa akaiky ho tonga, fa na dia misy aza ny sasany manararaotra mamoaka APK izay misy malware.
Mitandrema amin'ny apps Super Mario Run sandoka ho an'ny Android
Tandremo, ry mpampiasa Android, miaraka amin'ireo rindranasa sandoka Super Mario Run izay mihabetsaka amin'ny internet aorian'ny fanombohana ny lalao ho an'ny iOS.
Tena ilaina ve ny mpanadio na mpanadio mandeha ho azy ho an'ny Android?
Raha efa nanontany tena ianao hoe tena ilaina ve ny manadio automatique ho an'ny Android, ity ny hevitro marina.
Android 7.1.1 dia ho tonga amin'ny Nexus miaraka amin'ny patch fiarovana 5 Desambra
Android 7.1.1 Nougat dia manomboka haparitaka amin'ny fitaovana Nexus sy Pixel amin'ny fiandohan'ny volana Desambra, miaraka amin'ny patch security.
Ny fahafatesan'i Rita Barberá dia mamelona indray ny hevi-diso ateraky ny virosy mpandihy Rita Barberá
Lazainay aminao ny marina rehetra momba ilay viriosy horonantsary mpandihy Rita Barberá izay miparitaka toy ny afo mandoro ao amin'ny WhatsApp.
Mitandrema amin'ny fifampiraharahana amin'ny Zoma Mainty
Alohan'ny handehanana ao amin'ny Black Friday, tadidio fa afaka manome anao hoot izy ireo. Eritrereto ny zavatra ilainao ary diniho tsara ny vidiny alohan'ny tolotra.
Fandrahonana vaovao avy amin'ny virus hafa amin'ny solosaina toy ny "Mirai"
Fanafihana cyber vaovao mahery vaika kokoa noho ny virus Mirai no akaiky. Nilaza ny manam-pahaizana fa ny internet amin'ny zavatra no vavahady
Nilaza ny talen'ny fiarovana an'i Google fa azo antoka toy ny iPhone ny Pixel
Nilaza ny sefon'ny fiarovana an'i Google fa mitovy ny Pixel sy ny iPhone raha ny amin'ny filaminan'ny finday.
Fanairana Android: Mitandrema amin'ny hafatra PayPal, mety tsy avy amin'ny PayPal izany
Mitandrema amin'ny hafatra Paypal satria mety ho phishing na hafatra sandoka miaraka amin'ny tanjona tokana hangalarana ny angon-drakitrao toa ny teny miafina sy ny hafa.
Windows Hello fanamarinana mety tonga amin'ny Android
Ny fikasan'i Microsoft amin'ny Windows Hello amin'ny fitaovana Android dia ny ahafahanao miditra ao amin'ny PC-nao amin'ny alàlan'ny fanananao smartphone anao
Na inona na inona ataonao dia manara-maso hatrany ny toerana misy anao i Android
Na dia miorim-paka na mamafa ny Google Maps aza ianao dia manohy hatrany ny toerana misy anao ny fampiharana Google Play Store
Fomba fanamboarana sary sy horonan-tsary amin'ny serivisy roa tsara indrindra amin'izao fotoana izao
Mba hamerenanao ny sarinao sy ny horonan-tsarinao, misy serivisy roa manolotra fahombiazana lehibe: Dropbox sy Google Photos.
Manamafy i Motorola fa tsy hamoaka patch patch isam-bolana amin'ireo fitaovany
Nanambara i Motorola fa tsy hanavao ny Moto misy ny patch fiarovana Google isam-bolana izy ireo ary hamoaka azy ireo amin'ny fanavaozana ny firmware.
$ 50 BlackBerry DTEK299 no nambara, Clone Idol 4 mifantoka amin'ny fiarovana
Raha mitady telefaona manolo-tena amin'ny filaminana sy tsiambaratelo ianao, ny BlackBerry DTEK50 no finday mety tsara hiarovana ny angonao.
Mitandrina !! Pokeradar for Pokemon Go dia misy ao amin'ny Play Store sy APK ankehitriny, lazainay aminao ny loza ateraky ny fampiharana efa nandrasana hatry ny ela ho an'ny Android.
EYE !! BlackMart dia miditra ao amin'ny Play Store amin'ny anarana BlackMart3 ary efa manana fametrahana 500.000
Miakatra ny fanairana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Android rehefa mahita ny lavaka fiarovana ao amin'ny Google Play rehefa BlackMart3, fivarotana iray hisintomana fampiharana maimaimpoana maimaimpoana, miditra ao.
Google prompt dia fomba fanamarinana dingana roa vaovao ho an'ny Android sy iOS
Google prompt dia fomba vaovao fanamarinana 2-dingana izay manamora kokoa ny fiarovana ny kaontinao.
Facebook dia mitsikilo anay amin'ny alàlan'ny mikrô amin'ny finday
Fantatrao ve fa hoy i Kelli Burns mpitsikilo Facebook avy aminay amin'ny alàlan'ny mikrôfonan'ny finday na finday avo lenta noho ny fihainoana mavitrika maharitra?
Google dia namoaka ny tatitra momba ny fiarovana isan-taona izay nilazany fa manisa terminal 400 tapitrisa isan'andro hitady malware
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny Samsung ampiasainao amin'ny Smart Switch
Ampianarina anao izahay anio ny fomba fanamboarana backup an'ny Samsung anao amin'ny alàlan'ny Smart Switch, fampiharana noforonin'i Samsung izay hanamora ny asanay.
Afaka manao backup manual ao amin'ny Google Photos ianao izao
Koa satria ny fanavaozana vaovao ny Google Photos dia azonao atao izao ny manamboatra nomaniny ho solon'izay ny sarinao avy amin'ny fampiharana
Ilay vazivazy malaza izay manodinkodina ny iPhone an'ny Apple ary mamela azy tsy ho ilaina mandra-pahatapitry ny bateria
Sangisangy lazaina fa manenjika ny iPhone an'ny Apple ary mahatonga azy tsy hisy ilana azy mandra-pahatapitry ny baterin'ny terminal voakasik'izany
Androany dia tianay holazaina aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatry ny mpampiasa Android momba ny Mode Safe Android.
Miresaha soa aman-tsara ary tazomy ny angon-drakitrao noho ny Signal Private Messenger, WhatsApp azo antoka an'i Edward Snowden
Ny fampiharana izay heverin'ny manam-pahaizana ho ny resaka azo antoka indrindra amin'ny tantara fohy amin'ny fifandraisana vaovao na ny WhatsApp azo antoka an'i Edward Snowden.
Fanairana Android! Ny mpanonta 3D dia mety hihoatra ny fanaraha-maso ny rantsantanana
Ny fandinihana vaovao dia mampiseho fa amin'ny mpanonta 3D dia afaka mahazo dian-tanan-diso ianao mba hamitahana ny mpamaky nomerika ankehitriny.
Ahoana ny fomba hamoronana fakantsary fiarovana anao manokana amin'ny fampiasana vaovao amin'ny Android taloha. Tutorial video tsikelikely
Androany aho dia hampianatra anao amin'ny fomba tena tsotra ary tsy mandany vola euro iray akory, ny fomba famoronana fakantsary fiarovana antsika manokana
Mitandrema amin'ny hafatra izay manasa anao hampavitrika antso an-tsary amin'ny WhatsApp !!. GOTCHA IZAO !!
Ity hafatra ity izay manasa anao hampihetsika ny antso an-tsary amin'ny WhatsApp dia scam na scam lehibe. Aza tsindrio mihitsy ilay rohy miraikitra !!
Ny rindranasa tsara indrindra hanakanana ny rindranasa amin'ny fidirana tsy nahazoana alalana
Ny rindranasa tsara indrindra hanakanana ny rindranasa amin'ny fidirana tsy ara-dalàna ary hiarovana ny tsiambaratelo misy antsika amin'ireo mpanararaotra na fampiasana tsy mety azy ireo
Ianao dia iray amin'ireo maro voakasik'izany izay mieritreritra fa angalarin'ny Wifi-dry zareo. Eny, hifarana ny fangalarana Wifi
Instagram dia manome fiarovana fanampiny miaraka amin'ny fanamarinana singa roa
Ny filaminana dia nanjary zava-dehibe amin'ny Instagram izay mitaky fanamarihana roa manomboka izao.
LG manamboatra fahalemena amin'ny telefaona G3 an-tapitrisany
G3 an-tapitrisany no ireo izay tratry ny fahalemena izay efa voavahan'ny LG
Ahoana ny fomba hiarovana ny Android amin'ny sary.
Amin'ity lahatsoratra vaovao ity dia manolo-kevitra ny fampiharana maimaimpoana izahay izay hanampy anao hiaro ny Android amin'ny sary.